China Steel U Channel ASTM a36 Waayo, warshad Australia iyo saarayaasha |Zhanzhi
Kanaalka birtu waa bir xariijimo ah oo leh qayb iskutallaab ah oo qaabaysan.Kanaalka birtu waa bir dhismeed kaarboon ah oo loogu talagalay dhismaha iyo mishiinada, waana qayb bir ah oo leh qaybo kakan.kanaalka birta ah waxaa inta badan loo isticmaalaa qaab dhismeedka dhismaha, injineernimada derbiga daahyada, qalabka farsamada iyo soo saarista baabuurta, iwm.
Shayga alaabta ceeriin ee soo saarida kanaalka birta waa birta ku xidhan kaarboon ama birta daawaha hoose oo leh kaarboonka aan ka badnayn 0.25%.Kanaalka birta ah ee la dhammeeyey waxaa lagu keenaa shaqo kulul, caadiyeyn ama duubid kulul.
1) Fasalka: A36
2) Cabirka: 5#~40#, la habeeyey
Kanaalka birta ah waxa uu leeyahay alxan wanaagsan iyo sifooyin jeexjeexa iyo sifooyin farsamo oo dhamaystiran.
channel steel waxa loo qaybiyaa kanaalka birta caadiga ah iyo kanaalka birta fudud.Qeexitaanka kanaalka birta caadiga ah ee kulul ee duuban waa 5-40 #.Qeexitaannada kanaalka birta caadiga ah ee kulul ee ay bixiyaan alaab-qeybiyaha iyo dalbadeyaashu waa 6.5-30 #.
Tilmaamaha kanaalka birta ayaa inta badan lagu muujiyaa dhererka (H), ballaca lugta (B), dhumucda dhexda (D), iwm. Waqtigan xaadirka ah, qeexida kanaalka birta gudaha waxay u dhexeeyaan No.5-40, taas oo ah, u dhiganta dhererka waa 5-40 cm.Isla dhererka hoostiisa, kanaalka birta khafiifka ah wuxuu leeyahay lugo dhuuban, dhexda dhuuban iyo miisaan ka fudud kanaalka caadiga ah.No.18-40 waa kanaal weyn oo bir ah, iyo No.5-16 waa kanaal bir ah oo dhexdhexaad ah.
Kanaalka birta ah waxaa inta badan loo adeegsadaa dhismayaal dhismayaal, soo saarista baabuurta iyo dhismayaasha kale ee warshadaha, waxaana inta badan lala isticmaalaa I-beams.Isticmaalka, waxa loo baahan yahay in ay lahaato alxanka wanaagsan iyo siyaalo jeexjeexan iyo sifooyin farsamo oo dhamaystiran.Marka loo eego aragtida qaab dhismeedka birta, waa inay noqotaa saxanka garabka ee kanaalka birta, taas oo ah in la yiraahdo, kanaalka birta waa inuu istaagaa, ma aha mid u nugul.Marka la eego xaaladda culeyska qaabdhismeedka aan adageyn ama culeyska hooseeya ee xubnaha, kanaalka birta ayaa la isticmaali karaa .;Marka cidhifka la xoojiyo oo dusha sare uu qurux badan yahay, waxay ku habboon tahay in la doorto kanaalka birta.